Free Thinker: မင်္ဂလာတေး
ဘာသာပြန်စရာလေးရှိလို့ အကူအညီပေးစမ်းပါ ဟု မနေ့ နေ့ခင်းက မခင်လေး ဖုံးဆက်လာ၏။ ဘာများပါလိမ့်ဆိုတော့ သူက ဘာတဲ့ဆိုလား ပွဲတစ်ခုမှာ၊ Performance ပဲ ထားပါတော့၊ အဲဒါ သီချင်းဆိုပြရသည်၊ နောက်ပြီး အဲသဟာကို အဓိပ္ပာယ် ပြန်ရှင်းပြရမည် ဆို၏။ ပထမတော့ ဘာသာပြန်ဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာပြန်တာအောက်မေ့လို့ ခပ်လွယ်လွယ်ပင် ရပါတယ် ဟု ဆိုလိုက်၏။ နောက် သူရှင်းပြတော့မှ မျက်လုံးပြူးရသည်။
သူက မင်္ဂလာတေး သီချင်းကိုဆိုပြီး အဲသဟာကို သိုးဆောင်းဘာသာဖြင့် ပြန်ရှင်းပြရမည် ဟူ၏။ ကျွန်ုပ်ကား အင်္ဂလိပ်စာကို အနည်းအကျဉ်း ဖတ်တတ်သည့်တိုင် အရေးအသားမှာ အင်မတန် ချာတူးလန်လှသူ ဖြစ်၏။ အားမနာတမ်း ဝေဘန်ရလျှင် ကျွန်ုပ်အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားမှာ Primary3အဆင့်လောက်သာရှိ၏။
သာမန်စာစီစာကုံးလောက်ကိုတောင် အတော်ချွေးပြန်အောင် ရေးနေရသူတစ်ယောက်အနေနှင့် သည်လို အင်မတန် သိမ်မွေ့ ခက်ခဲလှသည့် မင်္ဂလာတေးကို ဘာသာပြန်ပေးပါဆိုတော့ အတော် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မိရသည်။ နောက်မှ ဘယ်လို လုပ်ရင် ကောင်းမလဲဟု စဉ်းစားကာ ပထမ သီချင်းစာသားအားလုံးကို ချရေး။ နောက်ပြီး ထိုစာသားများက ဘာကိုဆိုလိုတယ် ဆိုတာ သိအောင် တွေး။ နည်းနည်းရိပ်မိလာတော့မှ အနီးစပ်ဆုံး အဓိပ္ပာယ်ပေါက်အောင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်။
မင်္ဂလာတေးကို တွံတေးသိန်းတန် ရေးသားသီကုံးပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လို မပြောနှင့်။ မြန်မာလိုပင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည် အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါဦး။
တေးရေး - တွံတေးသိန်းတန်
တေးဆို - တွံတေးသိန်းတန်+တင်တင်မြ
ကျား (တူနှစ်ဖြာ . . . ရွှေဂဟေဆက်ဖို့ . . .
သွေမပျက်တဲ့ . . . . မေတ္တာ . . . .
ရေစက်ရဲ့ ရှေးအလာ . . . မနှေးခါခါ ချင့်တွေး . . . .
ဖြစ်ရေးခု . . . သမုဒယနွယ်လာ . . .
ခုဘ၀တကယ် . . . ဘယ်မမုန်းတော့ . . . လေး . . . .)
မ (ရှေးရေစက် . . . . အကြောင်းဖက်ဖန်လာ . . . .
ရွှေပဒေသာ . . . ငွေပဒေသာ . . . . ဝေေ၀ဆာဆာ . . .
စွေရွာဖြိုး . . . ရတနာမိုးသွန်းတဲ့ . . . .
ရက်မြတ် မင်္ဂလာ . . . အခါ)
ကျား (ဇေယျတု . . . သဗ္ဗမင်္ဂလံ . . . အောင်စေအတိတ်နဲ့ . . .
ကြွေးကြော်ညံကာ . . . သပြေနုမှာ . . . ငွေခရုပါ . . .
မသွေယခုပြုကြတဲ့ . . . မင်္ဂလာအခါ . . .
အောင်စေကြောင်း . . . ဆုတောင်း . . သွန်းပတ္ထနာ . . .)
ကျား+မ (တန်ဘိုး အနဂ္ဃရတနာ . . . နိတုံ ရွှေကိုသာ . . .
န၀ရတ် ကျောက်မြတ်ပုလဲနဲ့ . . . စီခြယ်သွန်း . . . . သည့်အခါ . . .
မင်္ဂလာခညောင်း . . . အပေါင်း ကျက်သရေ ပြည့်စုံလာ . . .
မောင်နဲ့မေ . . နှောင်ဖွဲ့ အခြေမှာ . . .
နေနဲ့လ . . ရွှေနဲ့မြ ပုံပမာ . . . . )
မ (အခါတော် . . . ပေးတာက . . . နတ်ရေးငယ် ရွှေစာ . . .
သာသနာရောင် လင်း . . . ကောင်းခြင်း . . ခု . . သည်ချိန် . . ခါ . . . )
မ (မင်္ဂလာ . . အခါတေးနဲ့ . . . ဟစ်ကြွေး . . . ဟစ်ကြွေးသံစာ . . .
နတ်ရေးတဲ့ . . ရွှေနဖူးစာ . . .
မင်္ဂလာ . . အခါတေးနဲ့ . . . ဟစ်ကြွေး . . . ဟစ်ကြွေးသံစာ . . .
လေးဆူဒီပါ . . . သီတာရေမြေ ဆုံးစေတော့ . . မုန်းပါနိုင် မောင်နဲ့သာ . . .)
ကျား (ရွှေကျမ်းသစ္စာ . . မသွေတမ်းချစ်မှာ . . ပစ်မခွာ . . နှစ်တစ်ရာ . .
ရှစ်ကမ္ဘာ မကပါ . . .
ရွှေကျမ်းသစ္စာ . . မသွေတမ်းချစ်မှာ . . ပစ်မခွာ . . နှစ်တစ်ရာ . .
မေတ္တာမျှလာ . . . တူနှစ်ဖြာ . . .
အကြောင်းရေစက် . . . ပေါင်းဖက်ဖို့ ဖန်လာ . . . )
တူနှစ်ဖြာ . . . ရွှေဂဟေဆက်ဖို့ . .
. . . ဆိုသည်မှာ ကိုယ်တို့မောင်မယ်နှစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ရမဲ့ အရေးမှာ - ဟု အဓိပ္ပာယ် ရပါလိမ့်မည်။ ရွှေဂဟေဆက်ဖို့ ဟု သုံးထားတာ အလွန်လှပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်တာတောင် ရိုးရိုးဆောင်တာ မဟုတ်။ ဘယ်တော့မှ မခွဲကြစတမ်းဟု သစ္စာတိုင်ကာ ဆောင်ကြမှာ ဖြစ်၏။
ရွှေဂဟေဆိုသည်မှာ ရွှေထည်ပစ္စည်း တစ်ခုလုပ်ဖို့ မီးပေးကာ ဂဟေဆော်ရသည်။ ထိုရွှေထည်နှစ်ခု ပေါင်းစပ်သွားလျှင် တစ်သားတည်း ဖြစ်သွားသည်။ ဤသည်ကို ရွှေဂဟေဟုခေါ်သည်။ သည်ကဲ့သို့ တစ်သားတည်းဖြစ်သွားသည့် ရွှေထည်ကို မူလအတိုင်း နှစ်ခုခွဲထုတ်ဖို့ရာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ဂဟေဆက်ပြီဆိုကတည်းက ရွှေထည်နှစ်ခုစလုံး အရည်ပျော်ကာ ရွှေမော်လီကျူးများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဒွေးရောယှက်တင် ဖြစ်သွားသောကြောင့်တည်း။
မောင်နှင့်မယ်သည်လည်း မင်္ဂလာဆောင်သည့်အချိန်မှ စကာ မည်သည့်အခါမှ ခွဲကြတော့မည်မဟုတ် ဟု တင်စားခြင်း ဖြစ်၏။
(ပြောရင်းနဲ့ ငါတောင် မင်္ဂလာဆောင်ချင်စိတ် ပေါက်လာပြီ။)
. . . ဆိုရာ၌ သွေ ဆိုသည်မှာ သွေဖည်သည်၊ တခြားရောက်သွားသည် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ သွေမပျက် ဆိုသည်မှာ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ချစ်ကြသည့် ချစ်မေတ္တာမှာ တခြား ဘယ်သူ့ဆီမှမရောက်၊ ဟောသည် တစ်ဦးတည်းကိုသာ မပျက်မကွက် အမြဲချစ်မည် . . ဟု ဆိုလို၏။
(ကျွန်ုပ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ထားတာသာ တွံတေးသိန်းတန် ဖတ်ရပါက ဟ၊ တယ်တော်တဲ့ ငါပါလား။ ငါ အဲသလောက်တော်မှန်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်မသိဘူး။ အခုမှ သိရတယ်။ အသိနောက်ကျလေချင်းဟု ငိုချင်းချလေမည်လားမသိ။)
ရေစက်ရဲ့ ရှေးအလာ . . .
. . . ဆိုသည်မှာ ယခု မောင်မယ်နှစ်ဦး တွေ့ကြဆုံကြ၊ မင်္ဂလာဆောင်ကြခြင်းမှာ ယခုမှ ကောက်ခါငင်ကာ ဖြစ်လာတာမဟုတ်။ ဟိုးယခင်ယခင် ဘ၀များစွာကတည်းက ရှိခဲ့ဖူးသော ရေစက်ကြောင့် ဖြစ်သည် ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်၏။
မနှေးခါခါ ချင့်တွေး . . . .
ဆိုသည်မှာ အကြောင်းမသိသူ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပေါင်းဖော်ရတာ လွယ်တာမဟုတ်။ မတော် သူနှင့်ကိုယ် သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါက စလယ်ဝင်ဖင်မမဲခင်က ကွဲကြပြဲကြ ဖြစ်တော့မည်။ သည်တော့ သူနဲ့ကိုယ် တစ်သက်လုံးပေါင်းဘို့ဆိုတာ ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလားဟု အခါခါ ချင့်ချိန်တွေးဆရသည်။
(ဟိုကောင်လေးတွေ စလယ်ဝင် ဖင်မမဲခင်က ဆိုတာ မသိပြန်ဘူးမဟုတ်လား၊ နင်တို့ခေတ်ကာလ ခလေးတွေကို၊ ခက်ပါတယ်ဟာ။)
(စလယ်ဝင်အိုး = နှစ်ယောက်စာ ဆန်နို့ဆီဘူးနှစ်လုံး တည်လောက်သည့် မြေထမင်းအိုး)
(၂ လမြူ = ၁ လမြက်
၂ ခွက် = ၁ ပြည် စသည့် မြန်မာအချင်အတွယ် မှ လာသည်။)
(ဖင်မမဲခင်က ဆိုသည်မှာ ရှေးယခင်က မြေအိုးဖြင့်ထမင်းချက်သည်။ ထမင်းချက်ရာတွင်သုံးသည့်မီးမှာ ထင်းမီးဖြစ်၏။ ထင်းမီးဖြင့်ချက်ရ၍ အိုးများဖင်မှာ မီးခိုးများဖြင့် မဲနေလေ့ရှိသည်။ စလယ်ဝင် ဖင်မမဲခင်က ဆိုသည်မှာ မင်္ဂလာဆောင်တော့ ပါလာသည့် ၂ ယောက်စာ စားလောက်ရုံထမင်းအိုး အသစ်ကလေးတည်လို့မှ ကြပ်ခိုးမ၀ခင် ဟု ဆိုလိုသည်။ ကြပ်ခိုးဝဘို့ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်လောက် အနည်းဆုံးချက်ရမည်။ ဖင်မမဲခင်က ဆိုတော့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးလို့မှ ဆယ်ရက်မပြည့်သေး။ ကွဲကြ ကွာကြမဲ့စကား ပြောလာပြီ ဟု ဆိုလိုသည်။) (နင်တို့ပြောရတာ မော . . ထှာ။)
အဲသလိုနဲ့ အခုတော့ သမုဒယတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နွယ်ပင်ကလေးများ ကဲ့သို့ တွယ်ငြိလာခဲ့ကြပြီ။
ခုဘ၀တကယ် . . . ဘယ်မမုန်းတော့ . . . လေး . . . .
ခုဘ၀မှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တကယ့်ကို ဘယ်လို နည်းနဲ့မှ မမုန်းကြတော့ဘူး။
ရှေးရေစက် . . . . အကြောင်းဖက်ဖန်လာ . . . .
ဟိုးအရင် ရှေးတုံးက ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ရေစက်က အကြောင်းဖန်လာခဲ့လို့
(ရေစက် = ပြုခဲ့ဖူးသော ကောင်းမှုကုသိုလ်၏ အကျိုးဆက်) (ရေစက်ချ အမျှဝေ)
ရွှေတွေငွေတွေ ပဒေသာပင်သီးသကဲ့သို့ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့
(ပဒေသာ = ပေါပေါများများ၊ များများစားစား၊ ဝေေ၀ဆာဆာ၊ ပဒေသာပင် = လိုသမျှ အကုန်ရသည့်အပင်)
ရတနာတွေ မိုးများရွာချသကဲ့သို့ ပေါပေါများများရှိတဲ့
(စွေ = မိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေသည်။
ဖြိုး၊ သွန်း = ရွာသွန်းဖြိုး = ရေများကို ဝေါကနဲသွန်ချလိုက်သကဲ့သို့ မိုးရွာသည်။
ရတနာ = လူများနှစ်သက်သည့်အတွက် ရတနာခေါ်သည်။)
ရက်မြတ် မင်္ဂလာ . . . အခါ . . .
ရက်ကောင်းရက်မြတ် မင်္ဂလာ အခါတော် ဖြစ်ပါပေ၏။
(မင်္ဂလာ ဆိုတာ ပါဠိသက်စကားလုံး ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမှုဟု ခြုံငုံဘာသာပြန်လျှင် ရနိုင်သော်လည်း အဓိပ္ပာယ် အတိအကျ ကို ကျွန်တော်မသိပါ။ ကျွန်တော့်တွင် ပါဠိသက်ဝေါဟာရ အဘိဓာန်စာအုပ်ကြီး ရှိသော်လည်း ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်သဖြင့် မရည်ညွှန်းနိုင်ပါ။ ပစ္စုပ္ပန်၊ သံသရာ နှစ်ဖြာသောကောင်းကျိုးများ၊ ပွားများစည်ပင်စေသည့် အကြောင်းဆိုလျှင် မှားအံ့မထင်။)
ဇေယျတု . . . သဗ္ဗမင်္ဂလံ . . .
မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံစေသောဝ်၊ အောင်ပါစေသောဝ်။
ဇေယျတု ဆိုသည်မှာ အောင်ပါစေသောဝ် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
သဗ္ဗ - ခပ်သိမ်းကုန်သော၊ အားလုံး၊ အလုံးစုံ။ မင်္ဂလံ = မင်္ဂလာ။
အောင်စေအတိတ်နဲ့ . . .
အောင်ပါစေဟူသည့် အတိတ်၊ နမိတ်နှင့် (နောင်အနာဂတ်တွင် အောင်မြင်ပါစေဟု)
(အတိတ်၊ နမိတ် = အနာဂတ်တွင် ဖြစ်မည့်အကြောင်းကို ယခုကတည်းက တစ်စုံတစ်ခုသော ဖြစ်ရပ်ဖြင့် ပြခြင်း)
အောင်ပါစေကြောင်း အောင်စေကြောင်း ဟု ညံညံစာစာ ကြွေးကြော်ပြီး သကာလ။ သတို့သားနှင့် သတို့သမီးတို့ ရှေ့တွင်ချထားသည့် ငွေဖလားကြီးထဲ၌ ထိုးစိုက်ထားသည့် အောင်နိမိတ်ဆောင် သပြေညွန့်ကလေးများမှာ မနေ့ကမှ ခူးယူလာသည့် အညွန့်နုနုထွတ်ထွတ် ကလေးများဖြစ်သည်။ ထိုငွေဖလားကြီးဘေးတွင် မင်္ဂလာဘိသိက်ပေးမည့် ပုဏ္ဏားကြီးက ဘိသိက်သွန်းလောင်းရန် ငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ခရုလည်း ပါပါသေးသည်။
မသွေယခုပြုကြတဲ့ . . . မင်္ဂလာ အခါ . . .
စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီးတော့မှ သဘောမတိုက်ဆိုင်လို့ ဖျက်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ့်ကို မလွဲမသွေ ပြုကြတဲ့ ဟောသည် မင်္ဂလာအခါရက်မြတ် အခါတော်မှာ
(အခါ = မည်သည့်အချိန်၌ မင်္ဂလာဆောင်လျှင် ကောင်းမည်နည်းဟု ဆရာဦးကျော်မြင့်၊ ဆရာဦးအောင်သန်း စသည့် ဗေဒင်ဆရာကြီးများနှင့် သေချာကျနစွာ ရွေးချယ်တွက်ချက်ထားသည့် အချိန်၊ အခါ၊ ကာလ)
အောင်စေကြောင်း . . . ဆုတောင်း . . သွန်းပတ္ထနာ . . .
ယခု မင်္ဂလာပွဲကြီး အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးမြောက်ပါစေကြောင်း ငွေခရုဖြင့် ရေများသွန်းလောင်း၍ ဆုတောင်း ထောပတ္ထနာ ပြုလိုက်ပါသည်။
တန်ဘိုး အနဂ္ဃရတနာ . . . နိတုံ ရွှေကိုသာ . . .
အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ရတနာဖြစ်သည့် အဖန်ဖန်အထပ်ထပ် သန့်စင်ထား၍ လုံးဝအညစ်အကြေးကင်စင်သည့် ဇမ္ဗူရစ်ရွှေစင်ကို -
(အနဂ္ဃ= အကန့်အသတ်မဲ့။ တန်ဘိုးအနဂ္ဃ= တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်)
(နိတုံရွေ = လုံးဝသန့်စင်နေသည့်ရွှေ)
န၀ရတ်စသော အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတာများနှင့် စီခြယ်လိုက်သည့်အခါ -
(န၀ရတ် = န၀+ရတ = ရတနာကိုးမျိုး = န၀ရတ်ကိုးသွယ် = ပုလဲ၊ သန္တာ၊ နီလာ၊ စိန်၊ ကြောင်၊ မြ၊ ဥဿဖယား၊ ပတ္တမြား၊ ဂေါ်မုတ်)
ကျက်သရေအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသွားပြီးလျင် မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းလာသကဲ့သို့ -
မောင်နှင့် မေသည်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးများဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ထား သော အခြေအနေတွင် -
နေနဲ့လ . . ရွှေနဲ့မြ ပုံပမာ . . . .
နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြပမာ အလွန်လိုက်ဖက် တင့်တယ်လှပါပေသည်။
အခါတော် . . . ပေးတာက . . . နတ်ရေးငယ် ရွှေစာ . . .
ယခု မင်္ဂလာအခါကိုပေးတာ လူမဟုတ်၊ နတ်ရေးသော ရွှေနဖူးစာ သာ ဖြစ်ပါသည်။
(နဖူးစာ = တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပေါင်းဖက်သင့်၍ ပေါင်းဖက်ရခြင်း၊ ဖူးစာဖက် = အပေါင်းအဖော် ဖြစ်ထိုက်သူ)
သာသနာရောင် လင်း . . . ကောင်းခြင်း . . ခု . . သည်ချိန် . . ခါ . . .
သာသနာရောင်ဝါလင်းသည့် ကောင်းမြတ်သော ယခု အချိန်အခါ ဖြစ်၏။
ယခု မင်္ဂလာအခါတွင် မင်္ဂလာရှိသော တေးသံသာကို တစာစာ ဟစ်ကြွေးသီဆိုကြပြီ။
သည်မောင်မယ် အကြောင်းဆက်၍ ပေါင်းဖက်ရခြင်းမှာ လူက ရွေးတာမဟုတ်။ နတ်ရေးသော ရွှေနဖူးစာသာ ဖြစ်တော့၏။
(ဆိုလိုသည်မှာ ဖူးစာနတ်က ဟောသည်မောင်ကလေးနှင့် ဟောသည်လုံမကလေးတို့ ပေါင်းဖက်ကြစေ ဟု ရွှေပေလွှာတွင် ရေးတင်ထားသောကြောင့် ပေါင်းဖက်ရသည် ဟူလို။)
(မင်္ဂလာ . . အခါတေးနဲ့ . . . ဟစ်ကြွေး . . . ဟစ်ကြွေးသံစာ . . .
နတ်ရေးတဲ့ . . ရွှေနဖူးစာ . . . )
လေးဆူဒီပါ . . . သီတာရေမြေ ဆုံးစေတော့ . . မုန်းပါနိုင် မောင်နဲ့သာ . . .
အရှေ့ကျွန်း၊ အနောက်ကျွန်း၊ တောင်ကျွန်း၊ မြောက်ကျွန်းတည်းဟူသော ကျွန်းကြီးလေးခု နှင့် ရှိရှိသမျှ ကုန်းမြေရေများ ကုန်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားသည့်တိုင် ဟောသည်မောင်ကို မမုန်းဘဲ အတူတကွ ပေါင်းဖော်ယှဉ်တွဲ နေထိုင်သွားပါမည်။
(ဒီပါ = ကျွန်း။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာကျွန်းမှာ တောင်ကျွန်းဖြစ်သည် ဟူ၏။)
ရွှေကျမ်းသစ္စာ . . မသွေတမ်း . . ချစ်မှာ . . ပစ်မခွာ . . နှစ်တစ်ရာ . . ရှစ်ကမ္ဘာ မကပါ . . .
နောင် အနှစ်တရာ၊ အို . . ဘယ်ကမလဲ။ ရှစ်ကမ္ဘာ (ကမ္ဘာပေါင်း ၈ ခု) ထိတိုင် ဟောသည် မယ်ကလေးကို ပစ်ခွာမသွားပဲ ချစ်နေပါမယ်လို့ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုလိုက်ပါရဲ့။
(ရွှေကျမ်းသစ္စာ . . မသွေတမ်း . . ချစ်မှာ . . ပစ်မခွာ . . နှစ်တစ်ရာ . . ရှစ်ကမ္ဘာ မကပါ . . .)
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မေတ္တာမျှကြတဲ့ အကျွန်တို့ မောင်မယ်နှစ်ယောက် ဟာ -
အကြောင်းရေစက် . . . ပေါင်းဖက်ဖို့ ဖန်လာ . . .
အတူတူပေါင်းဖက်ကြဘို့ ရှေးရေစက်အကြောင်းက ဖန်လာတာ မဟုတ်ပါလား ခင်ဗျာ။
ရေးဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးသော မခင်လေးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ။ ၂၀၁၅